Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny统计可读性Word
Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin’ny统计可读性Word
Fehezam-boninahitra iray isaky ny manoratra amin’ny vahoaka dia ny ankamaroany dia maamaky amin’ny enina amin’ny faha-enim-bolana amin’ny famakian-teny。 Raha ny ankamaroan’ny Amerikanina sy ny hafa dia mandroso firenena mamaky teny，ny habetsaky ny fahaiza-mamaky boky dia mety miovaova be.
Alao sary an-tsaina ny fahasamihafan’ny mpihaino anao。 Ny olona voalohany mitsidika ny tranokalanao dia mety hamaky amin’ny ambaratonga oniversite ary mahatakatra teny lehibe，fa ny mpitsidika tranokala manaraka dia mety mila rakibolana mba haha​​lala ny zavatra lazainao。 Tena mahakivy izany ary eo amin’ny tontolo an-tserasera，izay tian’ny olona ny fampahalalana eo no ho eo，ny tranga vaky ny mpamaky iray mandany fotoana hikaroka teny tsy mahazatra dia somaryy mangatsiaka ihan。 Mamadika mpamaky fotsiny ianao.
Tsy vitan’ny hoe zava-dehibe ny fijerena ny haavon’ny fanoratanao，fa te haha​​zo tsara ianao fa mora vakiana。 Ny antontan’isa mora vakiana momba ny teny dia fomba iray ahafahana miantoka ireo lahatsoratrao izay tsy vitan’ny fisintonana ny sain’ireo mpamaky rehetra anao，fa ny fitandreman’izy ireo hatrany.
1 Manoratra工商管理硕士Handresena sy Hampahafantatra
2 Fantaro和Lahatsoratry Flesch和ny Flesch-Kincaid
Manoratra工商管理硕士Handresena sy Hampahafantatra
Na dia mahay maamaky aza ny mpamaky anao，tsy midika izany fa tokony ho sarotra ny maamaky ny fanoratanao。 Ny tanjona amin’ny ankamaroan’ny endrika fanoratana dia ny mandresy lahatra na hampahafantatra。 Na izany aza，mety ho sarotra indraindray ny mametraka ny tenanao ao anatin’ny kiraron’ny mpamaky.
Noho ny fahafahanao mahalala ny dikan’ny teny ohatra，dia midsy izany fa ny mpamaky no ho tonga saina avy hatrany。 Azonao atao ny mamantatra hoe ahoana no famakiana ny lahatsoratrao miaraka amin’ireo fomba maromaro samihafa.
Ny iray amin’ireo fomba haingana indrindra hahitana ny fomba nanoratanao ny mpamaky anao dia ny manontany azy ireo fotsiny。 Azonao atao izany amin’nyalàlan’ny：
Mametraka插件mifandraika amin’ny WordPress博客。 Manontany fotsiny raha mora vakina ny lahatsoratra。埃尼西亚.
Mangataka fanamarihana amininny fizarana tsetsatsetsa。 Hevitra tsara izany satria azon’ny mpamaky manome tsipiriany manokana.
Manangona vondron’ireo mpamaky tsy tapaka anao ary angataho izy ireo hamaky lahatsoratra roa vao haingana ary manome valiny momba ny maha-mora azo azy.
Manaova tonian-dahatsoratra matihanina mba hijery ireo lahatsoratrao ary hanome hevitra anao haha​​tonga azy ireo ho mora vakiana kokoa.
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antoina hoe Paper Rater izay ampiasaiko indraindray handinihana ireo lahatsoratra ireo，indrindra raha reraka aho rehefa manoratra na amin’ny fe-potoana haingana izay tsy mamelany maminany aka ananamina ny fanovana。纸张评估者管理：
Mandinika ny haavon’ny fianarana。 Azonao atao ny mametraka ny haavon’ny fanabeazana avy amin’ny kilasy voalohany amin’nyalàlan’nysekoly fianarana diplaoma.
Hamarino ny fiandohany。 Mety haha​​soa izany raha manova ny asan’ny olon-kafa ianao ary tsy mahazo antoka raha voadona ilay izy.
Mamaritra ny fahadisoana sy fitsipi-pitenenana。 Raha feno fahadisoana ny lahatsoratrao dia mety hisy fiantraikany amin’ny famakiana izany.
最好的？ Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny fototra。 Raha te haha​​zo dikan-doka tsy misy adiresy ianao，dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
Mihoatra noho ny azo inoana，dia efa mampiasa safidy fanamarinana ny fitenin’ny teny ianao。 Na izany aza，azonao atao koa，manome lalana和Flesch阅读轻松，Flesch-Kincaid级别级别否Microsoft Word.
Ampifanaraho amin’ny manaraka ny baiko etsy ambany。微软Word 10 sy MS Word 2013.
Kitiho ny rakitra
Kitiho ny safidy（杰里奥·萨里·埃西·安巴尼）
Rehefa vita ny safidy vaovao dia tsindrio eo amin’ny "费雪纳" eo amin’ny ilany havia（jereo ny sary etsy ambany）.
Eo ambanin’ilay fizarana mitondra ny lohateny hoe头 "Rehefa ny fitsipi-pitenenana sy fifehezana amin’ny teny" 迪亚·托科尼hanamarina Boaty roa.
Voalohany，tadiavo ilay博伊·马纳拉卡（美国） "喜马拉雅山（Manamarina ny fitsipi-pitenenana）." Ity Boaty ity dia tokony ho voamarikao mba haha​​fahanao mametaka antontan’isa.
Jereo Indray纽约州Boaty Manaraka纽约州 "Asehoy ny antontan’isa azo vakina."
Kitiho ny Boaty "好".
Ankehitriny，isaky ny manao fisavana tampoka ianao dia mahazo pop-up amin’ny faran’ny farany izay manome anao ny antontan’isa mora vakiana.
Fantaro和Lahatsoratry Flesch和ny Flesch-Kincaid
Ny fanamarinana ny haavo an’ny kilasin’i Flesch-Kincaid dia manazava tsara。何安达那·阿米尼的制裁圣埃斯比·邦尼凡·索拉特拉·迪·阿米尼9.3纳拉瓦拉·法哈特洛·阿米尼陶纳·法西西维。 Mba haha​​zoana ny atiny ho amin’ny ambaratonga ambaratonga fahavalo，izay tiako，dia afaka manaisotra fotsiny ilay teny hoe "马哈菲那特拉" aho izay mitondra azy amin’ny isa 8.8.
Ankehitriny，ny fahatakarana，is is amin’ny Flesch Reading dia somary sarotra，singy tsy sarotra loatra。 Ny Microsoft dia manazava amin’ny antipiriany momba io
« Penguin 2.0 ringristmikud, uuringud ja kaotajate analüüs Kev Blog rau Dummies: Yuav Pib Txij Lub Blog Zoo Li Cas xyoo 2020 »
Statistilise loetavuse sõna Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin’ny